Berlanti Productions – Studio – Channel Myanmar
DC’s Stargirl Season (2) DC's Stargirl Season (2)=================2020မှာ HBO maxက​နေ developedလုပ်ခဲ့တဲ့ DC universeရဲ့ Stargirl seriesဟာအခုဆိုရင် CWလက်ထဲကို Season 2အဖြစ်​ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။CWရဲ့ series ဖြစ်သွား​ပေမယ့် CGI, settingနဲ့ costumeအပိုင်းမှာ Season1ထက် မနိမ့်သွားတဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းပိုပြီးဆွဲ​ဆောင်မှုရှိတဲ့ Teen Action series​ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိ​နေပါ​သေးတယ်။Season 1အဆုံးမှာ Injustice Society of Americaကို ဖြိုလှဲနိုင်ခဲ့တဲ့ Stargirlတို့ရဲ့ JSAအဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင် အရွယ်နဲ့မမျှတဲ့စိတ်ပင်ပန်း​မှုဒဏ်​တွေ၊ မ​ကောင်းတဲ့အမှတ်တရ​တွေရဲ့ ထိုးနှက်မှုကို စတင်ခံစား​နေရပါပြီ။ အဓိကဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ CourtneyWhitmoreဟာလည်း Stargirlဘဝနဲ့ ပုံမှန်ဆယ်​ကျော်သက်​ ကျောင်းသူဘဝကြားမှာ Balanceဖြစ်ဖို့ ရုန်းကန်​နေရပါတယ်။အရာရာကိုကာကွယ်​စောင့်​ရှောက်ရမယ့် တာဝန်က Stargirlရဲ့ တာဝန်ပဲလို့တရား​သေမှတ်ယူထားတဲ့ Courtneyရဲ့ မရင့်ကျက်မှု​တွေကိုဒီSeasonမှာ အဓိကထားပြီးပြသသွားမှာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်း ISAအဖွဲ့ပျက်သုဉ်းမှုမှာ ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ Cindy Burmanက Eclipsoကိုချုပ်​နှောင်ထားတဲ့ Black Diamondကို​တွေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် JSAနဲ့ Stargirlအ​ပေါ်မှာရှိတဲ့ ...
TMDb: 7.9/10 3860 votes
DC’s Stargirl Season (2)
DC’s Stargirl Season (1) Christmas အကြို ညတစ်ညမှာ JSA (Justice Society of America)အဖွဲ့နဲ့ Injustice Society တို့ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ကြရင်းJSA တစ်ဖွဲ့လုံး မျိုးကန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာ ဒဏ်ရာရပြီး သေခါနီးဖြစ်နေတဲ့ Starman က သူ့ရဲ့sidekickဖြစ်တဲ့Pat ကို Comis Staff ကြီး ပေးခဲ့လိုက်တယ်။ထိုက်တန်တဲ့သူတစ်ယောက်ကာိ ပေးအပ်ခိုင်းပြီး JSA ကိုဆက်လက်ရှင်သန်အောင်ထားဖို့ မှာခဲ့တော့တယ်။၁၀ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Pat ရဲ့ မယားပါသမီးCourtney Whitmore က Staff ကို မတော်တဆတွေ့သွားတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာStargirl Origin အတွက် အခြေခိုင်တဲ့ episode တစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။VFX တွေကလည်း တော်တော်လေး လန်းပါတယ်။မင်းသမီးလေးလည်း အတူတူပါပဲ။DC Fan ...
TMDb: 9.1/10 12 votes
DC’s Stargirl Season (1)
Titans Season3DC universeရဲ့ Hit seriesတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Titans season3ထွက်လာပါပြီSeason 2အဆုံးမှာ Wonder Girlဖြစ်သူ Donna Troyတစ်​ယောက် Deathstrokeနဲ့ တိုက်ပွဲမှာ​သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးDick Graysonက Nightwingဖြစ်လာပုံနဲ့ အဆုံးသတ်ထားပါတယ်Season 3အစမှာ​တော့ Ravenတစ်​ယောက် Donna Troyကို အသက်ပြန်သွင်းဖို့အတွက် Titan towerမှာ မရှိတဲ့အချိန်...Titansတစ်ဖွဲ့Gothamမြို့ကို ​ရောက်ရှိလာပြီး Joker​ရှာထားတဲ့ ပြဿနာ​တွေကို လိုက်ရှင်းရ​တော့မှာပါပြဿနာ​တွေရှင်းရင်းနဲ့ Jason Todd​​ခေါ် Robinတစ်​ယောက် Jokerရဲ့ လှည့်ကွက်​အောက်မှာ ဘာ​တွေဖြစ်သွားမလဲ၊Starfireတို့ ညီအစ်မနှစ်​ယောက်ရဲ့ တိုက်ပွဲက​ရော ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ​Titans familyထဲကို ​​​နောက်ထပ်ဘာCharacterအသစ်​တွေ ထပ်ဝင်​ရောက်လာမလဲRobinက​နေ Nightwingဖြစ်လာတဲ့ Dick Graysonတစ်​​ယောက် ဆရာဖြစ်သူ Batman​ခေါ် Bruce Wayneနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာ​တွေဖြေရှင်းသွားရမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားပါ File Size –460MB @EpisodeQuality –720p WEBDL Duration –45 minute (@Episode)Total Episodes:13EpisodesSubtitle – ...
TMDb: 8.1/10 1565 votes
You (2021) – Season 03 You (2021) - Season 03==================IMDb Rating - 8.0/10Hello Hello !အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် psychopath ကြီး ကိုကို Joe ပြန်လာပါပြီ။You ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး တစ်လုံးနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲကို အရောက်၀င်ခဲ့တာ Season 1&2ကြည့်ဖူးသူတွေအသိပါပဲဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ စီစန်မှာ Joe နဲ့ သူ့ချစ်သူ Love တို့ ဂြိုဟ်မွှေခဲ့တာလည်း မမေ့လောက်ကြသေးဘူး ထင်ပါရဲ့။ဒီ စီစန်မှာတော့ အတိတ်က အရိပ်ဆိုးတွေကို ဖုံးကွယ်မေ့ဖျောက်ပစ်ဖို့ လင်မယား ၂ ယောက်သား ကယ်လီဖိုးနီးယားကဆင်ခြေဖုံးဒေသတစ်ခုကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။Love ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ် နေရာသစ်မှာ မိသားစုဘ၀လေး ထူထောင်ဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ Joe ကတော့ နေရာသစ်မှာလည်း မရိုးနိုင်တာတွေ ဇာတ်လမ်းတွေ ထပ်ဖန်တဲ့အခါ ... ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။ နဂိုက ဇ ...
TMDb: 8.1/10 168000 votes
You (2021) – Season 03
You (2019) – Season 02 You (2019) - Season 02=================IMDb Rating - 7.7/10Season 01မှာ ဂျိုးဟာ အချစ်အတွက်နဲ့ အဆိုးရွားဆုံးဆိုတာတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။Season2မှာတော့ ဂျိုးတစ်ယောက် လော့စ်အန်ဂျလီကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး ဘဝသစ်စဖို့ကြိုးစားရင်း အချစ်သစ်နဲ့ တွေ့မှာပါ။"အချစ်အတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ် ဒီလိုလုပ်တာလည်း မှန်ကန်တယ်"ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်အတိုင်း လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့ဂျိုးတစ်ယောက် . ဒီလုပ်ရက်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရှောင်ပြေးဖို့အတွက် LAကို ရောက်လာပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ်မချစ်မိတော့အောင် သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်ရင်း ဘဝသစ်စဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒါပေမယ့်လည်း မှန်းထားသလိုတွေ ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာတော့....ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ Season 1တုန်းကလိုပဲ စိတ်ဝင်တစား သဲထိတ်ရင်ဖိုနဲ့ ဆက်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။Season2ဟာ စာအုပ်တွဲထဲက Hidden Bodiesဆိုတဲ့ အပိုင်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဂျိုးရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုလည်းပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်။Castတွေ အနေနဲ့ကတော့ ဂျိုး အဖြစ် Penn Badgleyက ပြန်လည်ပါဝင်ထားပြီး ...
You (2019) – Season 02
You (2018) – Season 01 You (2018) - Season 01 =================IMDb Rating - 7.7/10 ဂျိုး က စာအုပ်အရောင်းဆိုင်က သာမန် ဝန်ထမ်းလေးပါ။သူလုပ်တာဆိုလို့ စာဖတ်တာရယ် စာဖတ်ချင်တဲ့သူတွေကို စေတနာထားတာရယ်၊ပြီးတော့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်မိတာရယ်ပေါ့...ဒီလိုဖြစ်လာတာကလဲ တစ်ရက်မှာ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ဂျိုး အလုပ်လုပ်နေတဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုလာတယ် ဒီကောင်မလေးကို ကြည့်တာနဲ့ ဂျိုး စိတ်ထဲ အားလုံးတွက်ချက်ပြီးအမူအကျင့် နဲ့ ဒီကောင်မလေး ဘာလိုချင်တယ် ဘာကို တွက်ဆ နေတယ်ဆိုတာ အကုန်သိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ် ဂျိုး က သာမန်တော့ သာမန်ပါပဲ . ဒါပေမဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်ပါ... အရာအားလုံးကို အကွက်ကျကျစီစဉ်လေ့ရှိသူ ဖြစ်ပြီး လူတွေ ရဲ့ စိတ်ကို မှန်းဆပြီး ကစားရတာကို သဘောကျတက်တဲ့သူပေါ့။ သူ သဘောကျတဲ့ ကောင်မလေး နာမည်က ဘက်ခ် တဲ့၊ ဆင်းရဲတယ် ကြိုးစားတယ် ပွေရှုပ်တဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ရှိပြီး၊ ...
TMDb: 7.7/10 168000 votes
You (2018) – Season 01
Titans Season (2) Season 1 တုန်းက Trigon ထွက်လာတဲ့အခန်းမှာ ပြီးသွားရာကနေအခု Season2မှာ အဲဒီအခန်းကနေ ပြန်စထားပါတယ်။Trigon ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်နေတဲ့Dick Grayson ကို ရေချယ်နဲ့ဂါးတို့နှစ်ယောက် ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။Force Field ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ Kory နဲ့ Donna တို့ကကောသူတို့ကို ကူညီနိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ် Trigon ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို ရောက်သွားမလား။God Level အစွမ်းရှိတဲ့ Trigon ဆိုတဲ့ နတ်ဆိုးကိုသူတို့တွေ အပိုင်း ၁ မှာတင် စပြီး ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ဒီနတ်ဆိုးအပြင် trailer ကတည်းမှာကတည်းပြသွားတဲ့Deathstroke လည်း ပါဝင်လာပါပြီ။ဘယ်လို ပါဝင်လာမလဲဆိုတာကတော့ယခု ပထမဆုံးအပိုင်းလေးကို ကြည့်ရှုရင် သိနိုင်မှာပါ။ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင် Character တွေတော်တော်များများရဲ့အတိတ်ကိုတွေ့ရမှာတွေ့သလို Robin နှစ်ယောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခန်းကိုလည်း မြင်ရမှာပါ။Bruce Wayne လည်းပါလာပြီဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့နောက်ထပ်surpriseတစ်ခုလည်း ပါပါသေးတယ်။DC series ဆိုတော့ ဘယ်လောက်မိုက်မလဲဆိုတာပြောစရာမလိုတော့မယ်မထင်ပါဘူး။တစ်ပတ်တစ်ပိုင်းပဲထွက်မှာမို့လို့ တစ်ပတ်တစ်ခါပဲ ...
Titans Season (2)
Titans (2018) Season 1 [Complete] Batman ရဲ့ first Robinဖြစ်တဲ့ Nightwingဟာ Gotham မြို့မှာမတွေ့တော့တာ တစ်နှစ်ခွဲကြာခဲ့ပါပြီNightwingတစ်ဖြစ်လဲ Dick Greyson ဟာ Detroit မြို့မှာလာရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေခဲ့တယ်Detroit မြို့ရဲ့ ညတညမှာ မူးယစ်ဂိုဏ်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေ Nightwing ပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်နောက်တစ်ညမှာတော့ Greysonတို့ ရဲဌာနဆီ ရေချယ်လို့ခေါ်တဲလူထူးဆန်းမလေးရောက်လာခဲ့တဲ့အခါ Nightwing အတွက် တပည့်ပြန်မွေးဖို့အကြောင်းဖန်လာတော့တယ်Starfire ကလည်း လူမည်းcastဖြစ်နေပေမယ့် ဝင်ပူးထားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် နောက်ပိုင်း castကိူ လူဖြူပြန်ထည့်လာနိုင်ပါတယ်Beast Boy ရဲ့ transformationကိုလည်းတွေ့ရမှာပါTitans အဖွဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့.....(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူကတော့ ရဲမာန်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။) Quality – 720p DCU WEB-DLDuration – 45min (@Episode)Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Action , Adventure , FantasySource : 720p.DCU.WEB-DL.AAC2.0.H264-NTbTranslator - Ye Man ...
The Flash ( Season7) ပီးခဲ့တဲ့နှစ်က Covid ကြောင့် စောစောဇာတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ Flash Season6ရဲ့အဆက်Season7တော့ ဒီနှစ်မှာထွက်ရှိလာပါပြီ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Barry A.K.A Flash ဟာCrisis မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးချယ်မှုတခုကြောင့် Speed Force သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးသူ့ဆီမှာလက်ရှိပြေးနိုင်ဖို့ Speed force ဟာလည်း အနည်းငယ်သာကျန်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူ အိုင်းရစ်ဟာလည်း Mirror Universe မှာပိတ်မိနေပါတယ်Season6ရဲ့ Big Bad ဗီလိန်ဟာလည်း မြို့ကိုဒုက္ခပေးနေပါပြီဒီတော့ ဘယ်ရီဟာ artificial intelligence speed force ကို ထီထွင်ဖို့ကြိုးစားနေရပါတယ်သူ့မှာရှိတဲ့လက်ကျန် speed force နဲ့ မြို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ့မလားအိုင်းရစ်ရော ပြန်လွှတ်နိုင်မလား Speed Force ကို ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်ပါ့မလားဘယ်လိုစတေးမှုတွေ ကြုံရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ Season7မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင် Filesize : 500 MB ( Per ...
TMDb: 7.6/10 6897 votes
The Flash ( Season7)
Chilling Adventures of Sabrina Part4( Completed ) အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Sabrina လေးပြန်လာခဲ့ပါပြီPart3နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ သိခဲ့ရတဲ့အတိုင်း Sabrina ၂ယောက်မှာတစ်ယောက်က ငရဲဘုရင်မ လုပ်နေပြီး တစ်ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေဆီကိုပြန်သွားခဲ့တာကိုမြင်ရမှာပါပြီးတော့ Father BlackWood ဟာလည်း မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ အခု Part4မှာတော့Sabrina တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေကြမ်းဦးမလဲဆိုတာကိုမြင်ရဦးမှာပါ..ငရဲက တစ်ယောက်ရယ် လက်ရှိတစ်ယောက်ရယ်ကြားကအဖြစ်အပျက်တွေ ဆက်နွယ်မှုတွေကိုလည်းထပ်မြင်ရဦးမှာဖြစ်သလိုNetflix series တခုဖြစ်တာကြောင့် chilling adventures of sabrinapart4ဟာ ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေရကြိုးနပ်ပြီး စိတ်မပျက်စေခဲ့ဘူးဆိုတာကိုတော့ ရဲရဲကြီးပြောလိုက်ပါရစေ အ ရှေ့က part 1+ 2+3ကိုဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် Quality : NF WEBRip- 720pFormat : mp4Subtitle : Myanmar Subtitle ( Hardsub )Translator : Yoon Sandi Aung , Phue Pyae ...
TMDb: 8.4/10 1816 votes
Chilling Adventures of Sabrina Part4( Completed )
Chilling Adventures of Sabrina Part3အားလုံးစောင့်နေတဲ့စုန်းမလေးစဘရီနာပြန်လာပါပြီSeason 2မှာ နစ်တစ်ယောက်အမှောင်သခင်ကိုကိုယ်ထဲထည့်ပြီးငရဲကိုရောက်သွားခဲ့တာအခုseason 3မှာတော့သူ့ချစ်ချစ်စဘရီနာလေးကနစ်ကိုငရဲကနေဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီးပြန်ဆွဲခေါ်ထုတ်မလဲအမှောင်သခင်ကိုရော နစ်ကိုယ်ထဲကနေဘယ်လိုထုတ်ပေးမလဲပြီးတော့အားလုံးလည်းtrailerကြည့်ပြီးတဲ့အတိုင်းစဘရီနာတစ်ယောက်က season 3မှာ Queen of Hell ဖြစ်သွားမှာပါဒါပေမယ့်ဘုရင်မဖြစ်ဖို့ကအဲဒီလောက်ကြီးလည်း မရိုးရှင်းဘူးပေါ့နော်သူဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကျော်ဖြတ်ပြီးဘုရင်မတစ်ယောက်ဖြစ်လာမလဲအဲဒါတွေအပြင် season 2မှာ အမှောင်သခင်ကို သူတို့လှောင်ပိတ်ခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်ဆိုးကျိုးတွေကို သူတို့ကိုဗန်စုန်းမျိုးနွယ်တွေခံစားရလာတဲ့အခါမှာရော သူဘယ်လိုတွေဖြေရှင်းပေမလဲဒီ season3ကတော့ စဘရီနာတစ်ယောက်အရှုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အလုပ်တွေပြန်ရှုပ်တော့မယ် လုံးဝအမိုက်စားseasonတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Translators : Phue & Aye Mon KyawEncoder : Moe Myint Lwin Season-3(Completed) Zip File CM VIP Links Yoteshin / Megaup / Userdrive / Veryfiles
Chilling Adventures of Sabrina Part2Sabrina Season2ဟာ Rating 7.8 အထိရရှိထားပြီးတော့အားပေးမှူ့များစွာနဲ့ ပွဲထွက်လှခဲ့ပါတယ်....အရင် Season 1မှာ သွေးနှောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စဘရီနာတစ်ယောက်အမှောင်သခင်ကြီးရဲ့စာအုပ်မှာသူ့နာမည်ရေးထိုးတာနဲ့ဆုံးထားပြီးအခု Season2မှာတော့ အရင်ထက်ပိုပြီးDarkဖြစ်လာပါတယ်။ဒီ Seasonမှာ စုန်းလောကရဲ့ပိုနက်နဲတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ စဘရီနာ၊ ဟာဗီ၊ နစ်ခ်သူတို့သုံးယောက်ရဲ့သုံးဘက်ဆိုင်အချစ်တို့ကိုပါပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ဒါ့အပြင် ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေလဲပါဝင်လာပြီးစဘရီနာနဲ့ဘယ်လိုတွေများပတ်သတ်နေမလဲ၊အရင်Seasonမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့တိမ်မြုပ်နေတဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကရောဘယ်လိုတွေလဲ....ဒါတွေအားလုံးကို အခု Season မှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။စဘရီနာတစ်ယောက် အမှောင်သခင်ကြီးရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်သွားပြီးအမှောင်လမ်းကြောင်းနောက်ကိုလိုက်မလားဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့နဂိုစိတ်ရင်းအတိုင်းပဲရိုးသားစွာနဲ့ဆက်နေသွားမလားဆိုတာကိုတော့Season2မှာကြည့်လိုက်ရအောင်လား.... Translators : Aye Mon Kyaw , Pone Thone , Phue , HMO , NeveEncoder : May Pyae Sone Oo Season-2(Completed) Zip File CM VIP Links Yoteshin / Megaup / Userdrive / Veryfiles /
Chilling Adventures of Sabrina (2018) ဒီကားက Netflix ကထုတ်ထားတဲ့စီးရီးတစ်ခုပါ IMDB 8ရထားတဲ့ကားတစ်ကားပါစပယ်လ်မန်းမိသားစုရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ စဘရီနာဆိုတဲ့၁၆နှစ်ပြည့်ကာနီးကောင်မလေးကနေပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းကစပါတယ်ဇာတ်ကားနံမည်နဲ့အလိုက် သူမရဲ့နေရာကနေပြီးတော့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ရိုက်ပြထားတာပါသူမကတော့ စုန်းသွေးတစ်ဝက်လူသွေးတစ်ဝက်နှောနေတဲ့ ကပြားမလေးပါဟယ်ရီပေါ်တာကားနည်းနည်းဆန်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေရှိနေမယ်လို့ယုံကြည်ခံထားရတဲ့ကလေးမလေးဟာစုန်းမျိုးစစ်စစ်အဖြစ်ခံယူလိုက်ရမလားလူသားတစ်ယောက်အဖြစ်ပဲခံယူလိုက်ရမလားဆိုပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်လို့နေပါတယ်သူမရဲ့၁၆နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ၆၆နှစ်မှတစ်ခါပေါ်တဲ့သွေးရောင်လွှမ်းတဲ့လကြတ်မှုအောက်မှာ စုန်းမျိုးရိုးစစ်စစ်ဖြစ်အောင်သွတ်သွင်းချင်တဲ့သူ့ရဲ့အန်တီတွေနဲ့ ချစ်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့သူငယ်ချင်း လူသားတွေဘက်ကို လွန်ဆွဲရင်းနဲ့ဝေခွဲမရနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ၁၆နှစ်အရွယ် စုန်းကပြားမလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါပြီးတော့ ကောင်မလေးကလဲချစ်ဖို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့စွန့်စားမှုတွေကဘယ်လိုတွေရှိလဲသူ့မိဘတွေရော သူ့ကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ပြသနာတွေကိုရော....စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ဒေါင်းပြီးကြည့်လိုက်ဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အပိုင်း၁၀ပိုင်းရှိပါတယ် ၂ရက်ကို၁ပိုင်းနှုန်းလောက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒေါင်းရတဲ့ဘေကုန်ရကျိုးနပ်တဲ့ကားလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်...(အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့ Thinzar Htet ပဲဖြစ်ပါတယ်...) Translator .... ThinZar Htet / MiKiEncoder ..... Moe Myint Lwin Season- 1 (Completed) Zip File Vip Links Yoteshin / Userdrive / Megaup / Veryfiles
Doom Patrol Season (2) DC Universe ရဲ့ ပေါက်ကရလူထူးဆန်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Doom Patrol တို့ အဖွဲ့ ပြန်လာပါပြီ။Season 1 အဆုံးမှာ Mr.Nobody နဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပန်းချီကားထဲကနေ ပြန်ထွက်လာကြတဲ့အခါအားလုံးက Danny Street အပါအဝင် အားလုံးက ပိစိကွေးလေးတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။First Episode မှာတော့ အဲဒီပိစိကွေးလေးတွေဘဝနဲ့သူတို့တွေ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်နေလဲဆိုတာ ပြထားပါတယ်။ဒီ Season မှာ Niles ရဲ့ သမီးလေး Dorothy ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်အသစ်လည်း ပါဝင်လာပါတယ်။Dorothy မှာ စိတ်ကူးယဉ်သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။သူစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမျိုးမှာ အပြင်ကို ထွက်လာတတ်တယ်။Doom Patrol တဖွဲ့လုံးက သူတို့အပေါ် Chief ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုသိရှိသွားခဲ့တာမို့လို့Chief ကို တော်တော်လေး ဒေါသတွေထွက်နေကြပါတယ်။အဲဒီကြားမှာညပ််နေတဲ့သူကတော့ Chief ...
Doom Patrol Season (2)
DC’s Legends of Tomorrow Season (5) DC ရဲ႕ Legend Of Tomorrow ျပန္ျပပါၿပီ...ဒီSeason5မွာေတာ့ Crisis အၿပီး Legends ေတြျပန္လည္ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ေတြရဲ႕ ျပသနာေပါင္းစံုကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းရေတာ့မွာပါ...ဒီ Season မွာေတာ့ ဇာရီကို ပံုစံတမ်ိဳးအျဖစ္ထပ္မံျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ႏိုရာေလးကိုလည္း နတ္သမီးေလးအျဖစ္နဲ႔ျမင္ရမွာပါအခ်စ္ေတာ္ႀကီး ကြန္စတန္တင္းကိုလည္း သူ႔ရဲ႕ မၿပီးဆံုးႏိုင္တဲ့ငရဲခန္းရဲ႕ ျပသနာေတြနဲ႔အတူျပန္လည္ျမင္ရမွာပါ...Legends Of Tomorrow ရဲ႕ အပိုင္း ၁ ကို Crisis On Infinite Earths ရဲ႕ Part5အျဖစ္CrossOver မွာ စထားခဲ့တာမို႔ အပိုင္း ၂ ကေနစၾကည့္ရမွာပါ...ကဲ အားလံုးပဲ ဒီေလာက္ဆိုၾကည့္ဖို႔အဆင္ေျပေလာက္ပါၿပီေနာ္ Translators : CM Team Encoder : Moe Myint Lwin Complete ...
DC’s Legends of Tomorrow Season (5)
The Flash Season (6) အားလုံးစောင့်နေကြတဲ့ ဖလက် ပြန်လာပါပြီ....Season5တုန်း​က စီကေဒါနဲ့ အပွဲပွဲနွဲခဲ့ သမျှအခု Season6မှာ ဘယ်လို ဗီလိန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ပဲကြည့်ရမှာပါ...သေချာတာကတော့ ဒီ စီဆင်မှာ ဖလက်ကဝတ်စုံအသစ်နဲ့ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖလက် စီဆင်တွေက အကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှအားလုံးရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှု့တွေကို ရခဲ့ပါတယ်အခုလည်း ဒီစီဆင်ကရော ဘယ်လိုတွေ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးသွားမလဲကြည့်လိုက်ရအောင်လားဒီစီးရီးကို တပတ်တပိုင်းနဲ့ အမြန်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖလက်ဖန်များ ကြည့်လို့ရပါပြီနော် Translator : AugustEncoder : Moe Myint Lwin CMLink Episode (1) Kino / Yoteshin / Megaup / Upstream Episode (2) Kino / Yoteshin / Megaup / Upstream Episode (3) Kino / Yoteshin ...
TMDb: 6.7/10 2877 votes
The Flash Season (6)